Waxaan dhibcood kaliya ka log in aad u hesho
Muhiim Waxaan dhibcood kaliya ka log in aad u hesho
sano 2 3 todobaad ka hor #516 by JanneAir15
Hello! Waxaan ogaaday in markii aan abuuray mawduuc (sida this) Ma doonaya inaan qodobada 10 taas oo ah waxa aad ka heli marka la samaynayo mawduuc ama waxyaalaha kale sida dhajinta comment ama u jawaabno leh in ka badan characters 150 in post a. Waxaan tigidh shaqaalaha diray, laakiin waxaan jeclaan lahaa in sidoo kale halkan ka weydii. Sidaas waxaad fadlan iga caawin kara?
sano 2 3 todobaad ka hor #540 by Colonelwing
Haa waxaan aragto in aad ,, goobta forum Faransiis ma siin dhibcood ...
Waxaa laga yaabaa in wax aan shaqaynayn xaq on mecanic software ah.
sano 2 2 todobaad ka hor #561 by Gh0stRider203
Waxaan soo xusuusanayaa doonaa si ay madaxda ka
sano 2 2 todobaad ka hor #563 by Dariussssss
Si aad si fiican u daacad ah, waxaan xitaa ma dareemi aadan in ... in sida badan waa muhiim ii. Waxaan halkan u imid si aad u hesho qaar ka mid ah diyaaradaha ugu wanaagsan ee FSX ku wareegsan oo halkan at Forum, si ay gacan uga soo baxay dhibaatooyinka oo wuxuu ku raaxaysan kaliya ee bulshada this la yaab leh, taas oo run ahaantii ku koraa, sida maalin walba .... ma si ay u ururiyaan dhibcood qaar ka mid ah .. .
BTW, waxa isticmaalka dhibcood kuwa?
sano 2 2 todobaad ka hor #564 by Gh0stRider203
HADDII aad u kicin inay soo magacaaga, ka dibna Goto Points My aad this arki doonaa shaashadda soo baxa ..
Ururi dhibcood si ay u helaan Macmiil Jumbo free.
Times bishii 1 Jumbo = bts 1 000, bilood 3 = 2 000 bts, bilood 6 = 3 500 bts, bilood 12 = 5 500 bts
1 sano 11 bilood ka hor #611 by Kyrelel
Waxaa u muuqan lahaa in dhibcood logon mar dambe dhici, iyo "My Points" Doorashadan ayaa laga saaray - hadda, waxaan u leeyihiin in lagu bixiyo Jumbo? Waxaan u lahaa (Waxaan u maleynayaa) dhowaad 2500 dhibcood.
1 sano 10 bilood ka hor #656 by Rolando
Waxay noqonaysaa fiican si aad u hesho macluumaad ah oo ku saabsan this!
1 sano 10 bilood ka hor #657 by Gh0stRider203
Rolando qoray: Waxay noqonaysaa fiican si aad u hesho macluumaad ah oo ku saabsan this!
Ma ogi waxa ay tahay in ya sheegi, laakiin. Waxaa cad in aynaan mar dambe u hesho dhibcood ee lagu sameeyo walax on halkan. Waxaan ahay sida kaliya ee madow sida aad tahay.
1 sano 10 bilood ka hor #658 by rikoooo
Waxaan naafo nidaamka dhibcood sababtoo ah waxaan lahaa dhibaato farsamo aad u badan waxaa la, si kastaba ha ahaatee, in futur aan mar kale isticmaali kara haddii aan helno kortaan ee dhiqlaha.
Haddii aad ka badan 1000 dhibcood aad weli i weydiin kartaa Times Jumbo free, si dhibcood aanay baabba'ay.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: PranavPoken, Gh0stRider203, JanneAir15
1 sano 10 bilood ka hor #659 by Gh0stRider203
Waxaan lahaa malaha u dhow oo lahaa waxa aan la shaqayn lol
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.530